Njengoba kunezinhlekelele ezingama-28 izifunda ezingama-28 - Umagazini wamazambane
Manje, ezivandeni zabahlali base-Amur, ezitshalweni zamazambane, kungenzeka ukuthola ngamehlo enqunu inkathazo ye-polyphagous - i-ladybug enamaphoyinti angama-28 noma i-epilyahna. Ama-malebugs we-potato ikakhulukazi adla eziqongweni zamazambane, kepha adla ngamaqabunga pepper, utamatisi, isitshalo seqanda, ikhukhamba, ithanga, ezinye amakhabe, ummbila, soya.
I-Epilyakhna akuyona enye yezinambuzane ezaqhamuka ngaphandle eSifundeni sase-Amur. “Ungowokuzalwa eMpumalanga Ekude, futhi uhlala lapha isikhathi eside ngaphambi kokuba umuntu avele. Ukwengeza nje ukutshala amazambane, ikakhulukazi emkhakheni wezindlu, lapho kungekho ukulwa okulwa nakho, kubangele ukwanda kwenani labantu, ”kusho uPavel Zhirnov, inhloko yomnyango waseBlagoveshchensk wegatsha lesifunda iBederal State Budgetary Institution“ Rosselkhoztsentr ”esifundeni sase-Amur.
"Ukuqashwa kwedijithali" kuyethulwa esifundeni saseSmolensk
Inenekazi lamazambane esifundeni sase-Amur linika isizukulwane ngasinye ehlobo. Njengoba sesichithile ngaphansi kokungcola kwehlathi emaphethelweni ehlathi, ngaphansi kwenqwaba yezinsalela zezitshalo emasimini kanye nasendlini engenhla komhlaba, amabhungane ezinkomo aphuma ayokondla maphakathi noMeyi - ekuqaleni kukaJuni. Ubunzima be-epilyakhna ebusika buphakeme kakhulu, amabhungane awo angafi emazingeni okushisa aze afike ku-45C °, ukufa kwesisindo se-ladybird kubonwa kuphela ebusika ngeqhwa elincane neqhwa kakhulu. Esifundeni sase-Amur, kubuhlungu ngisho esifundeni saseTyndinsky, esaziwa ngesimo sezulu esibi.
Ngokombono wokuthi ugcwala kakhulu ngaphansi kokungcola kwehlathi, le ntokazi ibanga ukulimala okukhulu kwamazambane endaweni enamahlathi. Ezifundeni ezigasele kule ndawo, mncane, yize eminyakeni edlule kube nokuthambekela kokukhulisa isibalo sazo. Amabhungane ale ntokazi enamaphoyinti angama-28 adla ipuleti lamaqabunga lapho edla, ngaphandle kokuthinta imithambo, ngamanye amagama, agxobha amaqabunga. Amahlamvu anjalo alimele ngokushesha aphuzi bese ewa. Ngaphezu kokubhubhisa amaqabunga, ama-epilahnas athwalela izifo eziyingozi ezibangelwa amagciwane, futhi ngenxa yalokho, isivuno samazambane sincipha ngo-10-100%, okuqukethwe kwesitashi ezisezilimo eziyizigaxa kuyancipha.
“Ngemuva kokudla kahle amaqabunga amazambane amancane, ama-ladybugs abesifazane amazambane, aqala ngoJuni kuya maphakathi no-Agasti, aqala ukubeka amaqanda,” kusho uPavel Zhirnov. - Ukuzala kwe-ladybird kuphezulu kakhulu - amanye ama-femin ama-femin aletha amaqanda ayizinkulungwane ezimbili. Amaqanda adonsa izibungu eziphuzi ezikhanyayo, eziyindilinga, ezifika ku-2 mm ubude, ezinemigqa yemikhambi emnyama - izinaliti, nokho, azikwazi ukukhonkotha noma ngubani, ngoba zithambile kakhulu. Isikhathi sabo sokuphila siphela cishe inyanga eyodwa, izibungu, zilingisa abazali bazo, zidla amaqabunga ngokuqinile, futhi siziguqula namathambo. Ngakho-ke, ku-ladybird enamaphoyinti angama-6, womabili amabhungane nezibungu kuyingozi. Lapho-ke izibungu ziyajikijela zibe ngamabhungane amancane. Amabhungane amancane, ngaphambi kokuya ebusika, akondle kakhulu, futhi okunjalo kwamafutha asebusika kwenzeka ukusuka maphakathi no-Agasti kuya kwesimo sezulu esibandayo sokuqala - maphakathi no-Septhemba. Ochwepheshe bomnyango wokuvikela izitshalo egatsheni leFederal State Budgetary Institution "Rosselkhoztsentr" baxwayisa ngokuthi indlela enkulu yokulwa nale ntokazi enamaphuzu angama-28 iyindlela yamakhemikhali, evumela ukuthi ukutshala amazambane kuqedwe inkathazo okungenani amaviki ama-28 ngemuva kokufafaza. Ukuze amazambane asekhulile aphephe impilo, ukwelashwa ngamakhemikhali kwenziwa okungenani izinsuku ezingama-2 ngaphambi kokuvunwa. Lesi isikhathi esibizwa ngokuthi sokulinda.
Ngemiyalo eminingi yokusebenzisa umuthi, le nkathi isethwe ngezinsuku eziyi-10-25. Esifundeni sase-Amur, ehlobo kubanda kakhulu kunaseYurophu yaseYurophu, lapho izidakamizwa ezithengiswayo zahlolwa khona, ngakho-ke izidakamizwa zibola kancane futhi isikhathi sokuwohloka kwazo okuphelele ezitshalweni siyanda. Ngemuva kokulinda izinsuku ezingama-30, izithelo ezisetshenzisiwe zizobe ziphephile. Kuyadingeka ukulandela ngokunembile umthamo womuthi, ngokuya ngemiyalo enamathiselwe, ngaphandle kwesimo sokudla ngokweqile isilinganiso esinconywayo sesicelo, kodwa hhayi ukusibukela phansi. Kuphela uma usebenzisa umthamo onconyiwe, amanani asele omuthi kumkhiqizo ngeke angalimazi. Ungasebenzisi izidakamizwa eziphelelwe yisikhathi, eziphelelwe yisikhathi nezingagunyaziwe. Uma uhlela ukwelashwa okungaphezu kokukodwa ngesizini, bese usebenzisa izidakamizwa ezahlukahlukene ngesithako esisebenzayo esehlukile. Lokhu kuzosiza ekugwemeni ukuvela kwezinambuzane ezingalweli emithini. Ukungahlanganisi ukunqwabelana kwezinto ezinobungozi, kunconyelwa ukwenza ukwelashwa okungaphezulu kwe-2 yamakhemikhali ezitshalo zemifino nezithelo ngonyaka ngamunye esifundeni sase-Amur. Ukuze ugweme ukufa kwezinyosi, akunakwenzeka ukwenza ukwelashwa ngamakhemikhali wezitshalo ngesikhathi sokuqhakaza, kungenzeka kuphela ngaphambi noma ngemuva. Ngokuvamile kungcono ukusika izimbali ezihlahleni zamazambane, ukuvumela izakhamzimba ziye ekwakhekeni kwezilimo eziyizigaxa, hhayi ekuqhakambiseni okungenamsebenzi. Kungcono ukwenza ukucubungula ngokushesha nezindawo ezingomakhelwane, khona-ke ukufa kwezilokazane kuzobe kungaphezulu. Kuphephile ukulungiselela ukulungiselela ukwelapha izitshalo emgodini ojwayelekile wegesi noma nge-RPG respirator. I-Cotton-gauze, izindwangu zokugqoka azikwazi ukuvikela izitho zakho zokuphefumula kusuka kumakhemikhali. Gqoka izingubo ezimboza umzimba wakho ngokuphelele. Isitsha esisetshenzisiwe, isixazululo esisele kumele sichithwe ngokuqinile ngokwemiyalo efakwe kulungiselelo.
Ochwepheshe beRosselkhoztsentr batusa le mithi elandelayo: Commander, VRK (isakhi esiyinhloko somuthi obulala ngqo izinambuzane yi-imidacloprid), Iskra - Zolotaya, P Tanrek, VRK, Corado, VRK (isithako esisebenzayo - imidacloprid), Aktara, VDG (isithako esisebenzayo - thiamethoxam). Vikela emavikini angama-2-3 izidakamizwa ezinjengeQi-Alpha, EC (into esebenzayo - i-alpha-cypermethrin), i-Kinmix, i-EC (into esebenzayo - beta-cypermethrin), i-Lightning, i-EC (into esebenzayo - i-lambda-cyhalothrin). Ngaphezu kwalokho, umuthi ositshalweni ubola kakhulu kangangokuba ungabi yingozi ezinambuzaneni. Amalungiselelo emvelo yokulwa nenkomo nawo ayanconywa: I-Fitoverm, EC (into esebenzayo - aversectin C), Iskra - Bio (into esebenzayo - avertin N), Bitoxibacillin, P. Lamalungiselelo abulala izinambuzane ngemikhiqizo edoti yama-microorganisms, ngakho-ke ayinangozi kubantu. Isikhathi sokulinda kubo izinsuku ezimbili kuphela. Okomzuzwana, imikhiqizo yemvelo nayo ingenziwa ngaphandle kwemithi emibili. Ububi babo obukhulu ukususwa okulula kusuka kumacembe, kuphathwe izitshalo ngemvula noma ngamazolo amaningi, kanye nokusebenza okuphansi kokubhujiswa kwe-ladybug ngokuqhathaniswa nokulungiswa kwamakhemikhali. Ngakho-ke, ukwelashwa kwezitshalo ezinemikhiqizo yezinto eziphilayo kwenziwa ngaphandle kwesimo sezulu esomile, esicacile nesizolile, lapho kwezulu kungenzeki ngaphakathi kwamahora angama-2-8 ngemuva kokwelashwa.